Otu esi eme Roses na akwụkwọ akụkọ n'ụzọ dị mfe | Crafts Na
Marian monleon | | Crafts maka ụmụaka
Na nka nke taa anyi ga ahu -esi mee Roses na akwụkwọ akụkọ na ụzọ dị mfe. Ọ dị mfe na anyị nwere ike ime ya na ụmụaka ma jiri ya chọọ onyinye wee mee ka ha chee na ọ so na ya.
Enwere ike ime ha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị akwụkwọ ọ bụla, magazin, kaadiboodu, agba akwụkwọ na ha nwere ike iji mee ọtụtụ ihe n'ihi na ha zuru oke dị ka ihe ịchọ mma. Ana m egosi gị ihe atụ abụọ:
1 Akụrụngwa iji mee Roses:
Akụrụngwa iji mee Roses:
CD nke anaghị efe anyị, ma ọ bụ ihe ọ bụla dị okirikiri iji mee ka ọ bụrụ ndebiri.
Malite site na ịbịaru a gburugburu, na nke m enyerela m aka na CD, mana ị nwere ike iji ihe ọ bụla ịchọrọ: efere, mkpuchi si ite. Dabere n’otú ọ hà, okooko osisi ahụ ga-apụta otu nha ma ọ bụ ọzọ.
Obere gburugburu ndeputa ihe gburugburu.
Kanye akara n'ime gburugburu. Ọ bụrụ na ị na-eji pensụl eme ya, ị ga-ezere ịhụ akara nke akara a ka emechara, emeela m ya ka ị nwee ike ịhụ ụdị ellipse ahụ nke ọma.
Jiri mma ị na-ahụ ịkpụ a elliptical udi. Ọ ga - enyere aka idobe mkpa ahụ ma megharịa akwụkwọ ka ị na - ebipụ.
Nyefee ụdị a: malite site n'èzí ma jiri mpịakọta dum tụgharịa ruo mgbe ị ruru ọgwụgwụ.
Hapụ n’elu ala na naanị ya ga-ewere ụdị. Naanị aka ekpe tapawa na-ekpo ọkụ silicone na ị ga-enwe gị rose njikere.
Ị nwere ike jiri na oru di iche icheỌfọn, a na-eji ha maka ihe niile. M na-egosi gị abụọ esi achọ mma onyinye wee mee ka ha bụrụ ihe ịchọ mma zuru oke ma ọ bụ tinye ha n'akụkụ akụkụ nke etiti na-enye mmetụ ahụ pụrụ iche maka onyinye.
Enwere m olileanya na ị masịrị ha ma ha kpalie gị mmụọ, ka echiche gị fee ma mee ụyọkọ nke Roses, ntutu ntutu, ihe etiti, wdg.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Crafts maka ụmụaka » Otu esi eme Roses na akwụkwọ akụkọ n’ụzọ dị mfe